Designer ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက iPhone6~ The ICT.com.mm Blog
Designer ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက iPhone 6
Apple က ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ အရွယ်ကြီးမားတဲ့ iPhone ကို ထုတ်လုပ်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက် နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Designer Federico Ciccarse က အဆိုပါ iPhone ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီးတော့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကလည်း Designer Federico Ciccarse က iPhone နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Wall Street Journal တွင် Apple က၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒုတိယလ၀က်မှာ iPhone ၂ ခု ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး တစ်ခုက ၄.၅ လက်မ အရွယ် ရှိမှာဖြစ်ပြီး တစ်ခုမှာ ၅ လက်မအရွယ် ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလက်ရှိ iPhone 5S နှင့် iPhone 5C တို့ရဲ့ အရွယ်အစားက ဒေါင့်ဖြတ် တိုင်းတာလျှင် ၄ လက်မသာ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ Designer ရဲ့ ဓာတ်ပုံများထဲမှ ညာဘက်ဒေါင့်စွန်းတွင်ဖော်ပြထားသော ဓာတ်ပုံမှာ ၅.၅ လက်မ အရွယ် (1,568 x 878 Pixels) Display တပ်ဆင်ထားသော iPhone ဖြစ်ပြီး အလယ်ဓာတ်ပုံမှာ ၄.၇ အရွယ် (1,338 x 750) Display တပ်ဆင်ထားတဲ့ iPhone နှင့် ဘယ်ဘက်ဒေါင့်စွန်းတွင် ဖော်ပြထားတာကတော့ iPhone 5S ဖြစ်ပြီး. ၄ လက်မအရွယ် (1,138 x 649) Display တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
၄ လက်မ အရွယ် iPhone ကနေ အခုလို ကြီးမားတဲ့ iPhone ထုတ်လုပ်ခြင်းက Phablet စျေးကွက်ကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနစစ်တမ်းတွေအရ Phablet အသုံးပြုသူ အရေအတွက်တွေက ကမ္ဘာတစ်၀န်းလုံးမှာ နေ့စဉ် နှင့်အမျှ တိုးတက်နေပါတယ်။ Apple ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Samsung ကလည်း မျက်နှာပြင်ကြီးမားတဲ့ ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချနေပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိနေပါတယ်။ Designer Federico Ciccarse က စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ iPhone ရဲ့ အနောက်ဘက်မျက်နှာပြင်မှာ ကွေးကောက်ပြီး.အလွန်ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။
Newer Winter Olympic သမိုင်းကြောင်း
Older Free Wallpaper with Calendar – 2014/2 – Second Week
iPhone 6နဲ့ iPhone6Plus တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်များ
Appleရဲ့ သတင်းထူးကတော့ iPhone 6နဲ့ iPhone6Plusဆိုတဲ့ iPhoneအမျိုးအစားနှစ်ခုကို ကြေညာလိုက်တာပါ။ အဲဒီ ဖုန်းနှစ်မျိုးရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ...
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ Apple ရဲ့ Gadgets များ
ယနေ့မှာတော့ Apple က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က ကူပါတီနိုမှာ ပြိုင်ဘက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများကို စိုးရိမ်ဖွယ် လှိုင်းဂယက်ထစေမည့် သူ့ရဲ့ ပစ္စည်...
Apple က နည်းပညာထက် Lifestyle ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်
အင်္ဂါနေ့မှာ ပွဲဦးထွက်လာမည့် iPhone6ကတော့ တစ်ခြားလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ ဖုန်းတွေနည်းတူ features စုံလင်စွာပါရှိလာမှာ ဖြစ်ပေမယ့် Apple ရဲ့...
iPhone 6ကို ၀ယ်ယူဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေသူများရှိနေ
iPhone 6ကို ၀ယ်ယူဖို့ နယူးယောက်မြို့ရှိ Apple Storeရှေ့မှာ စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေ ရှိနေပါပြီ။ Appleက ကြေညာဖို့ ခြောက်ရက်အလိုနဲ့ အရောင်းဆို...
Sapphire ဖုန်းမျက်နှာပြင်များဟာ မာကျောပေမယ့် အတားအဆီးများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်
Sapphire ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ စက်တင်ဘာလအတွက် ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Appleက Sapphire မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ iPhone 6ကို အဲဒီလမှာ...
iPhone6မှာ ရာသီဥတု ကို တိုင်းတာနိုင်သည့် Sensor ပါရှိမည်
iPhone6မှာ ရာသီဥတု ကို တိုင်းတာနိုင်သည့် Sensor ပါရှိမယ်လို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Sun Changxu က ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရောင်းချမယ်လို့ သ...
iPhone6မှာ 10-megapixel ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားမည်
iPhone6နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့သတင်းများအရ iPhone6မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကင်မ...
Apple က ၄.၈ လက်မ Display ကို iPhone6တွင်တပ်ဆင်မည်
Wall Street Journal ရဲ့ Analyst ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ Apple က နောက်ထုတ်မယ့် iPhone ရဲ့ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ပြီးကြောင်းသိရပါတယ...
5 thoughts on “Designer ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက iPhone 6”
လွလည္းလွ၀ူး apple ကအဲလိုပံုစံထုတ္မွာမဟုတ္ဘူး.
Brilliant Media Services. says:
မေရာင္းေသးပါဘူး။ ဒီဇိုင္နာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ကူးပါ။
Pingback: iPhone6မှာ ရာသီဥတု ကို တိုင်းတာနိုင်သည့် Sensor ပါရှိမည် | ICT News